बलिउड/हलिउड Archives - नागरिक रैबार
रणवीरको ‘शमशेरा’को ट्रेलर : स्वतन्त्रताको लडाइँ लड्ने योद्धाको कथा
काठमाडौं । रणवीर कपुर स्टारर बलिउड फिल्म ‘शमशेरा’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । दास हुँदै नेता बनेको एक योद्धाको कथामा आधारित फिल्ममा रणवीर दोहोरो भूमिकामा देखिएका छन् । यशराज फिल्म्सले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ट्रेलरमा स्वतन्त्रताका लागि रणवीरले गरेको संघर्ष र खलपात्रको भूमिकामा देखिएका सञ्जय दत्तसँगको द्वन्द्वलाई समेटिएको छ । खाकीको बर्दी र निधारमा सेतो टीका […]
हलिउड अभिनेत्री एम्बर हर्ड विश्वकै सुन्दर अनुहार भएकी महिला घोषित !
काठमाडौं । हलिउड अभिनेत्री एम्बर हर्ड अहिले पूर्वपति जोनी डिपसँगको चिसो सम्बन्धले चर्चित छन् । हुनसक्छ, उनको व्यक्तित्वलाई लिएर विश्व विभाजित होला, तर विज्ञानका अनुसार उनी संसारकै सुन्दर अनुहार भएकी महिला समेत हुन् । पूर्वपति डिपसँग घरेलु हिंसाबारेको मुद्दामा हारेपछि एम्बर गत महिना विश्व मिडियाको हेडलाइन बनिन् । तर यसपटक अलग विषयले उनलाई चर्चामा ल्याएको […]
रणवीर स्टारर फिल्म ‘शमशेर’को टिजर सार्वजनिक
काठमाडौं । रणवीर कपुर, सञ्जय दत्त र वाणी कपुर स्टारर ‘शमशेर’ प्रदर्शन हुन एक महिना पनि बाँकी छैन । तीनैजना कलाकार प्रचारप्रसारमा जुट्दा निर्माण कम्पनी यशराज फिल्म्सले मंगलबार टिजर सार्वजनिक गरेको छ । टिजरमा हामीले रणवीर र सञ्जयको संक्षिप्त स्वरुप देख्न सक्छौं । आगामी जुलाई २२ मा रिलिज हुने फिल्मको टिजर सार्वजनिक गर्दै यशराज ब्यानरले […]
दक्षिण भारतीय सुपरस्टार अल्लु अर्जुन स्टारर ‘पुष्पा’ ले बक्स अफिसमा कमाइको रेकर्ड बनायो। फिल्मले हिन्दी बेल्टमा मात्र १ सय करोडभन्दा बढी कमाएर बक्स अफिसमा इतिहास रच्यो। ‘पुष्पा’ को क्रेज र लोकप्रियतासँगै अल्लु अर्जुनलाई भारतकै सुपरस्टार बनायो। यसको दोस्रो भाग यसै वर्षभित्र रिलिज गर्ने गरी निर्माण पक्षले तयारी गरेको छ। बलिउड प्रशंसकलाई ध्यानमा राखेर यसको स्कृप्ट […]
सलमानको फिल्ममा रामचरणको इन्ट्री
बलिउडका सुपरस्टार सलमान खानको मुख्य भूमिका रहने फिल्म ‘कभी इद कभी दिवाली’ लगातार चर्चामा रहन सफल छ । फिल्मसँग जोडिएर हरेक समय नयाँ नयाँ समाचार सार्वजनिक हुने गर्दछ । अहिले फिल्ममा साउथ सुपरस्टार रामचरण भित्रिएको समाचार बाहिर आएको छ । फिल्मको केमियोमा उनी देखिनेछन् । फरहान सम्जी निर्देशक रहेको फिल्ममा पूजा हेगडे, शहनाज गिल, वेन्कटेश, […]
बलिउड अभिनेता सलमान खान र उनका पिता सलिम खानलाई आइतबार ज्यान मार्ने धम्कीसहितको चिट्ठी प्राप्त भएको छ । मुम्बई प्रहरीले यो मामिलामा एफआइआर दर्ता गरेको छ । समाचार एजेन्सी पिटिआईले एक अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै आइतबार बिहान एक अज्ञात व्यक्तिले सलिम खानलाई उक्त चिट्ठी दिएको जानकारी दिए । अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार मर्निङ वाकपछि सलिम खान […]
शाहरुखमाथि पाँच अर्बको लगानी
सन् २०१८ रिलिज आनन्द एल रायको फिल्म ‘जीरो’ पछि अभिनेता शाहरुख खानले अभिनयबाट लामो ब्रेक लिए । तर, उनका फ्यानहरु उनलाई पुनः फिल्ममा हेर्नका लागि उत्साहित थिए । अब फ्यानका लागि प्रतिक्षाको घडी सकिएको छ । शाहरुखले एकसाथ तीन फिल्मको घोषणा गरेका छन् । जसमा यशराज प्रोडक्सनको व्यानरमा बनिरहेको एक्सन स्पाई फिल्म ‘पठान’, राजकुमार हिरानीको […]
शाहरुख खानको नयाँ फिल्म ‘जवान’को टिजर रिलिज
काठमाडौं । बलिउड अभिनेता शाहरुख खानको नयाँ फिल्म ‘जवान’ सन् २०२३ को जुन २ मा प्रदर्शन हुने भएको छ । शुक्रबार मुम्बईमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा फिल्मको टिजर सार्वजनिक गरिएको हो । दक्षिण भारतीय निर्देशक एट्लीसँगको सहकार्यमा शाहरुखको कम्पनी रेड चिल्लीले फिल्म निर्माण गर्न लागेको हो । एक्सन इन्टरटेनर फिल्ममा अभिनेत्री नयनतारा नायिकाको रुपमा हुनेछिन् । […]
पाँच सय करोडमा बन्दै प्रभासको ‘आदिपुरुष’
साउथका सुपरस्टार प्रभास पछिल्लो समय फिल्म ‘आदिपुरुष’ का कारण चर्चामा छन् । फिल्म ५ सय करोडको बजेटमा निर्माण हुन लागेको हो । भारतीय सबैभन्दा महँगो फिल्ममध्ये एक ‘आदिपुरुष’ हुने बताइएको छ । यो प्रभासको करियरकै सबैभन्दा महँगो फिल्म हुनेछ । भूषणकुमार फिल्मका निर्माण हुन् । भूषणकुमारले ‘आदिपुरुष’ को बजेट ५०० करोड रहेको बताएका छन् । […]
बलिउडका चर्चित गायक केकेको निधन
काठमाडौं । चर्चित बलिउड गायक केके (कृष्णकुमार कुन्नथ)को ५३ वर्षको उमेरमा मंगलबार राति निधन भएको छ । कोलकातामा लाइभ कन्सर्टमा प्रस्तुति दिएलगत्तै उनको निधन भएको भारतीय संचारमाध्यमले जनाएका छन् । कन्सर्ट प्रस्तुतिपछि होटलमा पुगेका उनको स्वास्थ्य बिगि्रएपछि तत्कालै उनलाई कोलकाता मेडिकल रिसर्च इन्स्टिच्युटमा लगिएको थियो । अस्पतालमा लैजाँदै गर्दा उनको मृत्यु भयो । अस्पतालमा पुगेका […]
चर्चित पञ्जाबी गायक सिद्धू मुसेवालाको गोली हानी हत्या
काठमाडौं । भारतीय गायक सिद्धू मुसेवालाको पञ्जाबमा गोली हानी हत्या गरिएको छ । २८ वर्षीय सिद्धूको आइतबार साँझ पञ्जाबको मनसा जिल्लास्थित जवाहरेक गाउँमा एएन-९४ रुसी एसल्ट राइफल प्रहार गरी हत्या भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । वास्तविक नाम शुभदीप सिंह सिद्धू भए पनि उनी सिद्धू मुसेवाला नामले परिचित थिए । उनको शरीरमा ३० राउन्ड गोली […]
आमिर खान स्टारर ‘लाल सिंह चड्डा’को ट्रेलर रिलिज
काठमाडौं । इण्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल)को फाइनल खेलमा बलिउड अभिनेता आमिर खान अभिनित ‘लाल सिंह चड्डा’को ट्रेलर रिलिज भएको छ । टम ह्यांक्स स्टारर हलिउड फिल्म ‘फरेस्ट गम्प’को रिमेक यो फिल्ममा करिना कपुर, मोना सिंह र नागा चैतन्यको पनि अभिनय छ । शारीरिक रुपमा अशक्त बालक र उसकी आमाबीचको प्रेमिल सम्बन्धलाई चित्रण गरिएको यो फिल्मको […]
ज्याकलिनलाई सर्तसहित विदेश भ्रमणको अनुमति
काठमाडौं । दिल्ली अदालतले बलिउड अभिनेत्री ज्याकलिन फर्नान्डिजलाई विदेश भ्रमणका लागि ६ दिनको अनुमति दिएको छ ।आबुधाबीको एस आइल्याण्डमा हुन लागेको आईफा अवार्ड २०२२ मा भाग लिन ज्याकलिनले मे ३१ देखि जुन ५ सम्म भ्रमण अनुमति पाएकी हुन् । बलिउड स्टारहरुले भाग लिने उक्त अवार्ड जुन २ देखि ४ सम्म हुँदैछ । विदेश जान ज्याकलिनले […]
बलिउड अभिनेता अलमान खान नेपाल आउने भनिएपनि अन्तिम समयमा आएर उनको आवागमन रोकिएको छ । ओडिसी र वलिकल्ब ग्रुप नेपाल च्यापटरको आयोजना र हिटा ग्रुपको पार्टनरशिपमा जेठ १४ गते काठमाडौ‌मा हुने भनिएको ‘दबङ्ग द टुर रिलोडेड’ कार्यक्रममा सलमान खान नआउने भएका हुन् । सलमान खान नआउने भएसँगै कार्यक्रम रद्द भएको छ । ओडिसी इन्टरटेनमेन्टले मंगलबार […]
बलिउड अभिनेता सलमान खान नेपाल नआउने भएका छन् । उनी नआउने भएसँगै जेठ १४ गते दशरथ रंगशालामा हुने भनिएको ‘दबंग टुर रिलोडेड’ फेरि रोकिने भएको छ । आयोजकले सलमान खान लगायत टिमको माग पुरा गर्न नसकेका कारण कार्यक्रम रोकिने भएको हो । आयोजक स्रोतले उनी नआउने पुष्टि गरेपनि यसबारे औपचारिक जानकारी विज्ञप्तिमार्फत दिइने जनाएको छ […]
हलिउड फिल्म ‘जुरासिक वर्ल्ड’मा नेपाली हस्तकला हेर्न पाइने (भिडियो)
काठमाडौं । हलिउड म्यागजिन हलिउड रिपोर्टरमा यसैसाता प्रकाशित नयाँ खबरअनुसार प्रतीक्षित फिल्म ‘जुरासिक वर्ल्ड’को आगामी श्रृंखलामा नेपालमा उत्पादित केही हस्तकलाका सामग्रीलाई पनि देख्न पाइने भएको छ । विश्व प्रतिष्ठित रिटेलर ब्रान्डहरु अकम्प्यानी र टेन थाउजन्ड भिलेजले यो ब्लकबस्टर फिल्मसँग टेबुलवेयर, टेक्सटाइल र एस्सेसरिज व्यवस्थापनलाई लिएर सम्झौता गरेका छन् । यो खबरलाई लिएर हलिउड रिपोर्टरको हेडलाइन […]
२२ वर्षीया सुहाना खान बलिउडमा इन्ट्री गर्न तयार
काठमाडौँ– बलिउडका बादशाह शाहरुख खानकी छोरी सुहाना खान २२ औँ वर्षमा प्रवेश गरेकी छिन् । सन् २००० को मे २२ मा जन्मिएकी सुहानाले आइतबार आफ्नो जन्मोत्सव मनाएकी हुन् । उनलाई जन्मदिनको अवसरमा करण जौहरदेखि फराह खानसम्म बलिउडका थुप्रै व्यक्तिले शुभकामना दिए । यिनै सुहाना छिटै बलिउडमा डेब्यु गर्दैछिन् । उनी जोया अख्तरको फिल्म ‘द आर्चरी’ […]
आमिर खानकी छोरी आइराले बिकिनीमा जन्मदिन मनाउँदा…
बलिउडका सुपरस्टार भनिने आमिर खानकी छोरी आइरा खानले आफ्नो जन्मदिन परिवार र नजिकका साथीसँग मनाइन् । यो विशेष अवसरका लागि आमिरका पूर्व पत्नीद्वय रिना दत्त र किरण राव सँगै देखिए । आइराका प्रेमी नुपुर शिखरे र सौतेनी भाइ आजादलाई पनि उक्त कार्यक्रममा देखियो । गर्मी लागेसँगै पुल पार्टीभन्दा अरु राम्रो विकल्प के होला र ? […]
‘अवतार-२’को टिजरलाई २४ घण्टामा १४ करोड ८६ लाख पटक हेरियो
काठमाडौं । सोमबार बेलुका रिलिज भएको जेम्स क्यामरुन निर्देशित हलिउड फिल्म ‘अवतार : द वे अफ वाटर’को टिजरप्रति उच्च क्रेज देखिएको छ । हलिउड रिपोर्टर म्यागजिनका अनुसार रिलिज भएको २४ घण्टामै फिल्मको टिजरलाई १४८.६ मिलियन (१४ करोड ८६ लाख पटक) अनलाइनमा हेरिएको छ । डिज्ने र ट्वेन्टिथ सेन्चुरीका अनुसार चीनबाट मात्र २३ मिलियन पटक हेरिएको […]
समाचार ‘चिसो मान्छे’लाई बाजुराली लवजमा ल्याउँदाको न्यानो अनुभूति
समाचार सलमान खानलाई ज्यान मार्ने धम्की
समाचार शाहरुख खानको नयाँ फिल्म ‘जवान’को टिजर रिलिज
समाचार चर्चित पञ्जाबी गायक सिद्धू मुसेवालाको गोली हानी हत्या
बलिउड/हलिउड शाहरुखमाथि पाँच अर्बको लगानी
समाचार बलिउडका चर्चित गायक केकेको निधन